Soo-saareyaasha budada Acitate Raw Methenolone Acitate & Soo-saareyaasha - Warshadda
Qalabka Methenolone Acetate (434-05-9)
Methenolone Pure Acetate waa steroid anabolic / injectedable kaas oo loo isticmaalo jirka jirka si loogu dhiirrigeliyo korodhka muruqa ee caanaha; ka hortagaa muruqyada murqaha waxayna xoojiyaan waxqabadka jirka iyo xoogga.
Qalabka Methenolone Acetate (434-05-9) video
Nooc Methenolone Acetate (434-05-9) Sharaxaad
Daawada Methenolone Acetate, oo sidoo kale loo yaqaanno primobolan, waa steroid anabolic anabolic derived from dihydrotestestoneone waxaana caadi ahaan laga helaa sida steroid afka ah halkii laga muday, oo leh guryaha daciifka ah iyo kuwa daciifka ah. Waxaa loo isticmaali karaa daawaynta lafaha lafta iyo dhiig-yarida, Waxaa la door bidayaa waxtarkeeda daaweyneed ee sarreeya iyo hoos u dhigidda sunta cagaaran marka la barbar dhigo analogs 17α-alkylated. Metenolone acetate waxaa loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1961. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si joogta ah loogu xadgudbaa isboortiga bani'aadamka sababtoo ah awooda kor u kaca murqaha iyo sidoo kale kor u qaadka waxqabadka iyo gardarrada. Waxay awood u leedahay kor u qaadida waxqabadka jimicsiga.
Qalabka Methenolone Acetate (434-05-9) Smamnuucista
Product Name Qalabka methenolone Acetate
Magaca Kiimikada NSC-74226; SH-567; SQ-16496; degmo
Fasalka Daroogada Androgen; Steroid anabolic; Qalabka Androgen
Molecular Wsideed 344.49
barafku Psaliid 138-139 °
Application Sida steroid anabolic
Waa maxay budada methenolone acetate (434-05-9)?
Daawada Methenolone Acetate, oo sidoo kale loo yaqaanno primobolan, waa steroid anabolic anabolic derived from dihydrotestestoneone waxaana caadi ahaan laga helaa sida steroid afka ah halkii laga duray, oo leh guryaha daciifka ah iyo kuwa daciifka ah. Waxaa loo isticmaali karaa daawaynta lafaha lafta iyo dhiig-yarida, Waxaa la door bidayaa waxtarkeeda daaweyneed ee sarreeya iyo hoos u dhigidda sunta cagaaran marka la barbar dhigo analogs 17α-alkylated. Metenolone acetate waxaa loo soo bandhigay isticmaalka caafimaadka ee 1961. Si kastaba ha ahaatee, waxaa badanaa loo isticmaalaa isboortiga bani'aadamka sababtoo ah awoodiisa kor u kaca murqaha iyo sidoo kale kor u qaadka waxqabadka iyo gardarrada.
Sidee budada methenolone acetate (434-05-9) shuqullada
Methenolone waa nooc ka mid ah DHT (ama inuu noqdo mid sax ah - waa qaab qaab beddelaad ah oo DHT). Waxaa ku jira dammaanad labajibbaaran oo kaarar ah hal iyo laba, kaas oo gacan ka geysanaya in la kordhiyo nooca anabolic hormoonka ah. Waxay sidoo kale qaadataa koox dheeraad ah 1-methyl oo ka ilaalisa burburka hepatitis. Joogitaanka hindhistaha acetate wuxuu sii difaacaa jirka ka yimaada dheef-shiid kiimikaad ah.
Meatenolone Acetate budada (434-05-9) Qiyaasta
Oral Primobolan (Methenolone Acetate): Isticmaalayaasha Bilowga ah ee Bilowga ah ee caadiga ah waxay caadi ahaan heli doonaan 50 - 100mg maalin kasta si ay u noqdaan qiyaasta waxtar leh ee Primobolan afka. Isticmaalayaasha dhexdhexaadka ah waxaa loo yaqaanaa bilaashka Primobolan oo ah noocyada 100 - 150mg maalin kasta oo natiijooyin fiican leh, waxaana isticmaala horumarka ay heli doonaan maalin kasta 150 - 200mg maalin kasta si aad waxtar u leh. Kala duwanaanshaha afka 'Primobolan' waa mid ka mid ah labo steroids oo afka laga qaato (oo ah mid kale oo Andriol oo ah oraah ahaan loo isticmaalo Testosterone Undecanoate) oo aan soo bandhigin wax tallaal ah ee hepatotoxicity. Sidaa darteed, qiyaasta sare ee Primobolan afka ah ayaa loo isticmaali karaa lakiin waa in la ogaadaa in afka Primobolan uu weli haysto cabbir ah cilad ka timid dheef-shiid kiimikaad iyo burbur ku dhaca beerka, sidaas darteed halista cudurka hepatotoxism ee Primo waa in aan si buuxda looga dhaga tirin, gaar ahaan sida Qiyaasaha dawada ee caadiga ah ee afka laga qaato waxaa lagu kordhiyay qaddar badan iyo ka badan.
Isticmaalayaasha dheddigga oo raadinaya inay ka soo baxaan waxqabadka iyo koritaanka jireed ee ka yimaada Primobolan ayaa heli doona raaxo iyo faa'iido leh 50 - 75mg maalin kasta oo leh khatar aad u yar.
Dheefaha methenolone Acetate budada (434-05-9)
Primobolan (Methenolone acetate) waa mid ka mid ah steroids ugu faraxsan ee ka mid ah jirka iyo ciyaartoyda sababtoo ah faa'iidooyinka cajiibka ah ee u dhimanaya. Waxaa lagu sharaxay dad badan sida daaweyn qumman oo loogu talagalay wareegyada steroidka. Waa xal fiican oo loogu talagalay dhammaan cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha kuwaas oo aad u nugul ama u nugul arimaha sida beerka, sunta, iyo arrimaha kale ee beerka marka la isticmaalo steroids afka marka ay la yimaadaan saameyn aan yareyn iyo faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin;
Waxay ka caawisaa kor u qaadida heerka xoogga iyo tamarta - isticmaalayaashu waxay ku xisaabtamaan dhismahan si ay u yeeshaan xoog iyo koror xoog leh inta lagu jiro wareegga xeeladaynta. Waxay u shaqeysaa iyada oo loo oggol yahay in laga saaro nitrogen taas oo ah arrin lagama maarmaan u ah soo saarida tamarta.
①Sida dhismaha muruqyada - tani waxay sidoo kale ku daraysaa xajinta nitrogen. Dhismaha murqaha waxaa ku jira nitrogen, iyo iyada oo lagu kaalmeeyo xajinta nitrogen, steroid wuxuu ka baxaa xaalad ku haboon dhismaha muruqyada cusub waxayna xajinayaan kuwa hore.
②Inay khatar galiso halbeegga cad-cadaynta - steroidkan waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah kuwa ugu nabadgelyada suuqyada, iyo dadka isticmaala marnaba inay ka walwalaan fal-dambiyeedka.
③Waxay kordhisaa heerka xaddiga dufanka - tani waa ujeeddadeeda ugu weyn; caawinta wareegga jarista. Waxay ka caawisaa hoos u dhigista dufanka jidhka ee guud ee ku caawinaya dhismaha murqaha iyo kordhinta xoogga dadka isticmaala.
Soo iibso budada methenolone Acetate from Buyaas.com
dib u eegis 1 waayo, Qalabka Methenolone Acetate (434-05-9)
Qalabka METHENOLONE ACETATE waa mid aad u faa'iido leh.
Meatenolone Root Mastenolos (303-42-4)